प्रदर्शित पृष्ठ (x) र पृष्ठको जम्मा सङ्ख्याहरू (y) फर्ममा देखाइएको छ Page x/y जब तपाईँ कागजात मार्फत माउसले स्क्रोल गर्नुहुन्छ, पृष्ठ सङ्ख्या प्रदर्शन हुन्छ जब तपाईँ माउसको बटन छोड्नुहुन्छ. जब तपाईँ दायाँ स्क्रोलपट्टी प्रयोग गरेर स्क्रोल गर्नुहुन्छ, पृष्ठ सङ्ख्या मद्दत टिपको रूपमा प्रदर्शन हुन्छ. स्थितिपट्टी र स्क्रोलपट्टीको पृष्ठ सङ्ख्या ढाँचा आइडेन्टिकल हो.
तपाईँलेनेभिगेटर प्रदर्शन खुला वा बन्द गर्नलाई पृष्ठ नम्बरफाँटमा डबल क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ ।
निश्चित पृष्ठमा जानका लागि, पृष्ठ सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस् Page नेभिगेटरमा बटन घुमाउनुहोस् र प्रविष्ट बटन थिच्नुहोस्.
सर्टकट कुञ्जी प्रेस गरेर बदल्नुहोस्+आदेशCtrl+F5, पृष्ठ सङ्ख्या राख्नका लागि स्विच गर्नुहोस्. जब तपाईँले प्रविष्ट प्रेस गर्नुहुन्छ, कर्सर चयन गरिएको पृष्ठमा जान्छ.